Kushanyira Sri Lanka: vashanyi vekuSpain vanoda Visa here? | Absolut Travel
Sri Lanka ndiyo imwe yenyika dzanga dzichiwana kukosha kwakawanda mumakore achangopfuura senzvimbo yekushanya. Nyika, inozivikanwa se "misodzi yeIndia" nekuda kwenzvimbo yayo, inokwanisa kuita kuti chero vashanyi vanopedza mazuva mashoma munharaunda yavo vade. Zvavo makomo ane minda yetii kana maguta ayo anoyevedza ekoloni ndezvimwe zvezvinonyanya kukwezva.
Asi nyika inewo mhuka dzakasiyana-siyana dzinogara musango munzvimbo dzayo dzinochengeterwa mhuka dzakadai senzou nembada. Zvivezwa zvaro zveBuddha zvakavezwa mumatombo uye mahombekombe emusango ekumaodzanyemba akakwana pakusevha ndezvimwe zvezvinhu zvinonyengedza kuwedzera kwenhamba yevashanyi gore rega rega.
1 Asi vashanyi vekuSpain vanoda Visa yekupinda muSri Lanka?
2 Nzira inodiwa yekupinda munyika
Asi vashanyi vekuSpain vanoda Visa yekupinda muSri Lanka?
Kushanyira Sri Lanka, kungave nekuda kwezvikonzero zvevashanyi, nekuda kwezvikonzero zvebhizinesi kana nekuda kwekufamba kuenda kune imwe nyika, zvakakosha kuwana Sri Lanka visa izvo zvinokutendera kuti upinde uye upedze nguva munyika zviri pamutemo. Vagari veSpain unoda kunyorera Visa usati washanyira Sri Lanka, kunze kwekukwanisa kuratidza zvimwe zvinodiwa nenyika pavafambi vekunze.
Visa yekupinda muSri Lanka, inozivikanwawo seETA, inodiwa kune vese vanofamba. Imvumo inoshanda yekupinda kamwe chete munyika uye unogona kuiwana mushure mekubhuka ndege, asi nguva dzose usati wapinda munyika. Iwe unofanirwawo kuratidza kumukuru wezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti une humbowo hwerutsigiro rwemari pakugara kwako munyika, pamwe nekuratidza pasipoti inoshanda kweinenge mwedzi mitanhatu kubva paunopinda munyika.
Zvimwe zvinodiwa kune avo vanopinda muSri Lanka, kungave nekuda kwekushanya kana nezvikonzero zvebhizinesiNdiwo kuchengetedzwa kwendege yekudzokera kune imwe nyika kana kubhadhara yakakosha vhiza yebhizinesi kana iwe ukapinda munyika kune bhizinesi, basa kana kutenga uye kutengesa zvigadzirwa uye / kana masevhisi.
Nzira inodiwa yekupinda munyika
VeSpain vari kuronga kushanyira Sri Lanka vanofanirwa kuwana yavo ETA Sri Lanka vasati vapinda munyika. Unogona kuzviwana nekuenda kunozvikumbira iwe pachako kumumiriri weSri Lankan kuSpain, asi chinhu chinonyanya kukosha ndechekuzviita kuburikidza neInternet. Uye ndezvekuti nyika yeAsia ikozvino inobvumira maitiro kuti aitwe pamhepo kufambisa kuwanikwa kwekushanya kunyika.
Izvo zvinodikanwa kutevera matanho ekuzadza fomu, izvo zvaungade zano reunyanzvi. Nezve mutengo wekuwana ETA Sri Lanka, Inofungidzirwa kusvika ku45 euros maererano ne data yazvino inopiwa neSri Lanka, Kunyangwe zvingasiyana nenguva yaunoronga rwendo rwako. Mutengo weETA Sri Lanka nekuda kwezvikonzero zvebhizinesi unogona kunge uine imwe mutengo uchienzaniswa neETA nekuda kwezvikonzero zvekushanya.
Chinhu chakajairika mumhando iyi yemaitiro kugamuchira mhinduro yepamutemo kuburikidza nechiteshi chekutaura, senge email. Tsamba iyi kazhinji inogamuchirwa mukati memazuva manomwe, saka zvakakosha kuzviita nenguva isati yasvika zuva rekupinda munyika kuti uve nechokwadi chekuti unayo kana nguva yasvika. Sezvineiwo kune masangano nemakambani anopa kuita rudzi urwu rwemaitiro kuvafambi kuitira kuti varege kunetseka pamusoro pechinhu.
Kana ukaronga kupinda muSri Lanka mukati memazuva asingasviki 7 uye iwe uchida mvumo yako yeETA nekukasira, inogona zvakare kugadziriswa asi iwe unofanirwa ratidza muchikumbiro kuti inzira yekukurumidzira uye izvi zvinogona kuva nemubhadharo wekuwedzera, sezvo vachifanirwa kugadzirisa chikumbiro cheETA munguva shoma kupfuura nguva.
Sezvinoonekwa, zvinodikanwa kuti veSpain vanyore Visa kuti vakwanise kupinda muSri Lanka chero chikonzero chekufamba, kungave kwekushanya kana rwendo rwebhizinesi. Nzira inodiwa inofambisa kufambisa kwevashanyi kana vasvika panhandare yendege uye inobvumira nyika kuve nekutonga kukuru kweavo vanopinda munharaunda yayo nekuyambuka miganhu yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kushanyira Sri Lanka: vashanyi vekuSpain vanoda Visa here?